Soomaaliya, 06 May 2018
Wararka ka imanaya magaalada Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qarax xooggan lala beegsaday baabuur kuwa milatariga ah oo ay saarnaayeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Kenya.
Djibouti: Tababarka Booliiska Somalia
Tababar ayaa dhawaan dalka Djibouti ugu soo gaba gabagaboobay ku dhawaad 200 oo askari oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya iyadoo tababarkani u socdey 3 bilood.
Somilaland oo Joojisay Khudaarta la soo Dejiyo
Wasaaradda Ganacsiga ayaa sheegtay in la joojiyay soo dejinta khudaarta dibedda laga keeno, si waxsoosaarka loo kobciyo.
Djibouti: Xiisadda Militari ee Shiinaha iyo Maraykanka
Shiinaha ayaa beeniyay in ciidankiisa jooga saldhigga uu ku leeyahay Djibouti ay ileyska laysarka ku shiisheen diyaaradaha dagaalka Maraykanka ee isicmaalla saldhigga Maraykanka ee Djibouti.
Muqdisho: Kheyre oo Jaraa'id Qabtay
Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa shir jaraa’id ku qabtay xarunta Villa Somalia, ka dib markii uu ka soo laabtay dalka Belguim oo uu kaga qeyb galay shir dhinaca ammaanka ah oo halkaasi ka dhacay.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadka waxaad ku maqli doontaan qoddob kala duwan oo siyaasadda la xiriira
Xildhibaano iyo wafti caalami ah oo gaaray Beledweyne
Faaqidaadda: Dib u dhiska ciidamada Soomaaliya
Shirka Brussels oo lacag loogu deeqay Somalia
Shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa qodobada ugu muhimsan ee la isla gartay ka mid ahaa in €100 milyan oo euro oo deeq ah si toos ah loo siiyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maxaa hortaagan dib u dhiska ciidamada Somalia?
Dalalka deeq bixiyayaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dedejiso isbeddalada ay ku sameyneyso ciidamadeeda.
Guddoomiye Maxamed Mursal oo xilka la wareegay